इन्टरनेटको अज्ञात समूहले सोनी विरुद्ध काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्ने ! #OpSony #Hacktivist [With Video]
Aakar Anil April 15, 2011
सोनीले ह्याकर ‘जिओहट’ (Geohot) का विरुद्ध अदालत मा मुद्दा हालेपछि सोनीका विभिन्न वेवसाइटहरु माथि आक्रमण गर्दै आएको अज्ञात (Anonymous) समूहले १६ अप्रिल का दिन भने सडक मै ओर्लिएर ‘सोनी’ को विरुद्ध मा विरोध प्रदर्शन गर्ने भएकोछ ।
हामीलाई अज्ञात समूहबाट प्राप्त भएको जानकारी अनुसार काठमाडौँ मा पनि सोनी कम्पनी को विरुद्ध १६ अप्रिल मा प्रदर्शन गरिने भएको छ ।
घटना विवरण : के भएको थियो ?
आइफोन को जेलब्रेक गरेर चर्चामा आएका ह्याकर ‘जिओहट’ ले आफूले किनेको सोनी को ‘Sony Play Station console’ (गेम डिभाइस) लाई ह्याक गरेका थिए । जिओहट ले ‘रिभर्स इन्जिनियरिङ’ गरेर सोनी को उक्त ‘डिभाइस’ मा अन्य ‘एप्लिकेशन’ हरु चलाएका थिए । पछि उनले कसरी ह्याक गरे भन्ने कुरा आफ्नो साइट geohot.com मा राखिदिएका थिए ।
सोनी को गेम स्टेशनलाई ह्याक गर्ने तरिका ‘साइट’ मा राखेपछि सोनीले जिओहट विरुद्ध Digital Millennium Copyright Act (DMCA) को उल्लंघन र कम्प्युटर ठगी (computer fraud) तथा प्रतिलिपी अधिकार हनन (copyright infringement) गरेको भन्दै सोनी कम्पनीले अदालत मा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । सोनी कम्पनीले उनका विरुद्ध मुद्दा हाल्ने मात्र नभइ उनको युट्युब (youtube), पेपल (paypal), सोसल मिडिया साइट (social media) आदि का सम्बन्धमा सम्बन्धित कम्पनीहरु सँग ‘डिटेल’ जानकारी माग गर्‍यो । साथै जिओहट को साइट हेर्ने सबैको आइपी (IP) मागियो । सोनी ले माग मात्र के गरेको थियो, पेपल ले जिओहट को सम्पूर्ण जानकारी सोनीलाई दियो । अदालत ले जिओहट ‘भिजिट’ गर्ने सबैको IP Address हेर्न निर्देशन दियो ।
तर जिओहट ले वास्तविकता मा ‘आइफोन अनलक’ गरे झैँ सोनी को गेम स्टेशन ह्याक गरेका थिए । जस्तो कि, एकपटक फोन किनेपछि, फोन आफ्नो हुन्छ, र त्यसलाई जे पनि गर्न सकिन्छ । जिओहट ले पनि त्यसै गरेका थिए, उनले सोनी को गेम स्टेशन किनेर ल्याएपछि ‘रिभर्स इन्जिनियरिङ’ गरेर अन्य कुरा पनि चलाउन सक्ने बनाएका थिए, अनि त्यो काम कसरी गरियो भनेर इन्टरनेट मा राखेका थिए ।
जिओहट ले सोनी PS3 को जेल ब्रेक गरेका थिए, पाइरेसी हैन । आफूले सामान किनेर ल्याइसकेपछि त्यो सामान स्वत आफ्नो हुन्छ, आफ्नो सामान, आफूले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । सोनीले बिनाकाम को बखेडा झिकेर इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरु को ‘प्राइभेसी’ (गोप्यता) को उपहास गरेको छ । सोनीले जिओहटको Paypal एकाउन्ट हेर्ने, साइटका भिजिटरका IP Address हरु हेर्ने काम गरेर इन्टरनेटमा प्रयोगकर्ताको गोपनियता को खिल्ली उडाएको छ । अत: सोनीका विरुद्ध अज्ञात समूहले विगत केही हप्ता देखि आन्दोलन गरिरहेको छ । साइटलाई अत्यन्तै लोड दिएर साइट डाउन गरिने टेक्निक DDoS (Distributed denial of service attacks) का माध्यमबाट सोनीका साइटहरु डाउन गरियो ।
स्मरणिय रहोस् विकिलिक्स का जुलियन असाञ्ज विरुद्ध पेपल, मास्टरकार्ड लगायत ले सेवा नदिएपछि उनीहरुको साइट अज्ञात समूहले ‘अपरेसन पेव्याक’ भन्दै DDoS बाट डाउन गराएका थिए । मास्टरकार्ड, भिजा, पेपल लगायत दर्जन साइटहरु अज्ञात समूहले डाउन गराइसकेको छ । मानवहित र इन्टरनेट स्वतन्त्रता भन्दै उनीहरुले आफ्ना कामहरु गरिरहेकाछन् । अत: उनीहरु आफूलाई ‘hacktivist’ (ह्याकर+अभियानकर्ता) भन्न रुचाउँछन् ।
अज्ञात समूहले निम्न तथ्यहरु उजागर गर्दै सोनीलाई आफ्नो कदम फिर्ता लिन चेतावनि दिएका थियो ।
हुनत अस्ति को दिन देखि नै सोनी र जिओहट को मुद्दा टुंगिएको छ । जिओहट ले अब देखि सोनी कम्पनीका कुनै पनि उत्पादन मा रिभर्स ईन्जिनियरिङ नगर्ने र गरेमा जरिवाना तिर्ने सहमति भएको छ । साथै सोनी कम्पनीका साइटहरुमा जिओहट ले आक्रमण गरेका छैनन् भन्दै उनलाई सफाइ दिइएको छ ।
तर संसारभर फैलिएको अज्ञात समूहले भने, सोनी कम्पनी ले चालेको कदम कुनैपनि हालत मा न्यायसंगत नभएको भन्दै सोनीको विरुद्ध आन्दोलन जारी राख्ने भएको छ । युट्युब लगायत का साइटहरु तथा जिओहट को साइट हेर्ने लाखौँ प्रयोगकर्ताहरुको गोपनियता सोनीले उल्लंघन गरेको भन्दै सोनीलाई कुनै पनि हालतमा माफी दिइन नसक्ने बताएको छ । हालै जारी गरेको नयाँ भिडियोमा ‘शनिबार’ को विरोध कार्यक्रम पछि, सोनीमा झनै ठूलो आक्रमण गर्ने चेतावनी अज्ञात समूहले दिएको छ ।
अज्ञात समूह को नयाँ भिडियो :
We have got following Press Release :
#OpSony update, GeoHot settlement, and April 16th IRL protest
Anonymous Promises Biggest Attack Ever on Sony
P.S. ईमेल तथा ट्विटर मा प्राप्त जानकारी मा आधारित
Abc August 1, 2012 at 11:50 AM
if there aren't any hackers in the world then Technology would be 10 years back. Hackers are the base for the Tech development.
Ujjwol August 1, 2012 at 11:50 AM
काठमाण्डुको कुन ठाँउमा हो ??
खै, यही ठाउँ भनेर त भनेको छैन । सोनी कम्पनीको सामान आयात गर्ने कम्पनिहरुको अगाडि हुनसक्छ ।